Zuva: Kukadzi 7, 2020
Mitengo inodhura muKati neimbwa Chikafu
Kuva chipfuyo chakakosha zvakanyanya maererano nekugovera kunzwa kwekunakirwa. Pfungwa yekuti chese chinhu chipenyu chakakosha inoumba iwo mamiriro ekutora peturu. Nekudaro, iko kwakapetwa kwekupa zvakanakira nharaunda kune izvi zvisikwa [More ...]
IMM Yakatenderwa Veruzhinji Yezvekutakuka ..! New Tariff Inotanga Muvhuro
UKOME yasarudza kuita shanduko yemutengo mutsva nekuda kwekuwedzera kukuru kwemitengo mumari yekufambisa yeruzhinji isina kushanduka kwemakore angangoita matatu. Mune mutero mutsva uchaitwa Muvhuro, Kukadzi 3; tikiti yemagetsi yakazara [More ...]
İzmir Çamlık Steam Locomotive Museum yakavhurwa neVashanyi
Turkey chete Museum iri rimwe muEurope kutungamirira locomotive uye chiutsi locomotive Museum iri mumusha Selçuk woruwa Izmir summerhouse akadirana achienda ku epamba uye dzimwe vashanyi. Çamlık muSelçuk dunhu reİzmir [More ...]
Akaderedzwa Zvifambiso Zvinodiwa zveVadzidzi veChikoro Chakavanzika mu Ankara uye Izmir Vakarambidzwa!
Musi waNdira 17, 2020, vadzidzisi vepachikoro chakazvimirira vakatanga kutumira zvikumbiro zvavo kumaguta makuru emudhorobha muA Ankara neIzmir, pakadaidzwa neCommunity School Mudzidzisi Solidarity Network. [More ...]
Ordu Metropolitan Municipality, uyo ari piyona wemapurojekiti achaunza chiratidzo kuguta, kuvaka "Atatürk Park Sea Star" munzvimbo iri pakati peMidi Restaurant neTeleferik Sub Station kuita kuti mhenderekedzo inonyanya kubatsira. [More ...]
Nhamba yechitima 44015, iyo inoita kuti Eskişehir Konya abudiswe, anogovera chingwa padyo neguta reSülümenli reAfyon uye anoedza kuyambuka mugwagwa nokuputsa zvipingamupinyi apo zvipingamupinyi zvakavharwa padanho rekuyambuka. [More ...]
Kune chero here kuwedzera kweMarmaray Fees?
Kuitira kuti riwedzere mupfupi mupfupi mubavha kubva ku 2.60 TL kusvika 3.50 TL mubhazi revanhu vega, IETT, metro uye metrobus mutero kumusangano weTravelation Coordination Center unoitirwa paDisaster Coordination Center yeIstanbul Metropolitan Municipality. [More ...]
Veruzhinji Vanofamba nemotokari dzinodzivirirwa muKonya
Konya Metropolitan Municipality iri kuita disinawon nebasa rekufambisa yeruzhinji mota dzinotakura makumi ezviuru zvevanhu zuva rega rega. Zvikwata zvakabatana neKonya Metropolitan Municipality Dhipatimendi reDziviriro uye Dziviriro, yakawedzera furu uye denda [More ...]
Tsaona dzinosanganisira trams dzichimhanya paBağcılar Kabataş nzira inorekodwa nemacamera. MaTrams anoshanda zviuru zvevanhu zuva rega rega anogona kuita tsaona nguva nenguva. Dzimwe nguva madrama anowira nemota dzimwe nguva [More ...]
Union of Chambers of Craftsmen neArtisans muIstanbul yakazivisa kuti sarudzo makumi matatu neshanu muzana yakaitwa muIstanbul. Iyo hanzi inotarisirwa kuuya mukumanikidza mushure mekusaina kwevane masimba. Zvekufambisa Coordination ku Disaster Coordination Center yeIstanbul Metropolitan Municipality [More ...]
Kune avo vari kutsvaga basa muEskisehir, Estram Mwenje Rail Systems, inova imwe yemubatanidzwa weMetropolitan Municipality kuburikidza ne İŞKUR. 48 yekushambadzira kushambadzira yakabudiswa na. Maererano neshoko, kanenge gore 1 riripo [More ...]
Erkan Yağcı, Mutungamiri we Union of Mediterranean Tourismistic Hoteliers, akakurudzira kuchinja kune iyo njanji nzira pakati peAlanya neAntalya kuitira kuti vashanyi vasiye mahotera avo uye vasvike kunzvimbo dzeguta. Alanya Tourism Ekuchidzira Foundation (ALTAV) Mutungamiri, anoongorora chikumbiro chaYaqucı [More ...]
Kocaelispor Derincespor Kuwedzera Ndege kubva kuCity Park yeDerby
Kocaeli Metropolitan Municipality TransportationPark inoronga kumwe kudzoserwa kweguta derby uko Kocaelispor neBelediye Deronetspor vachasangana muKocaeli Stadium neSvondo, 9 Kukadzi na13.30. KUTENGA KUSVIRA KÖRFEZ NEMAHARA 150 KS [More ...]